Maalinta: Ogast 6, 2018
Dowlada hoose ee Magaalaweynta Malatya waxay shaqooyin dammaanad ka qaadis ah ka sameysay Alparslan Türke is Boulevard oo ah mid ka mid ah waddooyinka isku xira waqooyiga. Cusbitaalka Gobolka cusub, Cusbitaalka afka iyo ilkaha, Agaasime waaxeedyada isboorti ee dhalinyarada cusub, Hoolka isboorti gudaha [More ...]
Maareyn Duulimaadyada Garoonka Diyaaradaha ee Istanbul
Dhammaan shaqooyinka ayaa si buuxda u socda kahor furitaanka rasmiga ah ee gegada diyaaradaha ee magaalada Istanbul. Duulimaadkii ugu horreeyay ee garoonka cusub wuxuu dhacay May. 3 kun oo mitir 750 mitir iyo 60 mitir oo ballaaran [More ...]
Gaadiidka raaxada leh ee Isbitaalka Faransiiska ee dhakhtarka ilkaha
Dowladda Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay sii wadaysaa dhismaha wadooyinkeeda iyo dayactirka ay ka waddo magaalada oo dhan. Marka la eego baaxadda daraasadaha ay sameysay Waaxda Gadiidka, wadooyin kale duwan oo gaadiid ayaa laga dhisayaa meelaha lagama maarmaanka u ah magaalada. Waxaa laga sameeyay gobolka Basiskele Yuvacik [More ...]
Khadka Tareenka Xarunta ee Magaalada Mooshinka
Duqa Magaalada Bursa Metropolitan Caalin Alinur Aktas ayaa ku dhawaaqay bartilmaameedka 2 June ee T2018 tram ee Istanbul Street. Tani waxaa sidoo kale la furay inta lagu guda jiray munaasabada dhacdada booqashada Warbaahinta. Duqa magaalada Aktaş ayaa sheegay in ay jiraan dhibaatooyin kaynaklanan oo ka dhashay fahamka qandaraaslaha qandaraaslaha ee ganacsiga. [More ...]
Xaaladda Casriga ah ee Casriga oo la furay Tunceli
Dawlada hoose ee Tunceli, oo nolosha siisay mashaariic badan oo waaweyni waqti gaaban oo loogu tala galay soo saarista casriga ah ee Tunceli, waxay soo bandhigtay joogsiyo casri ah, hawo hawo leh kana ilaalinaysa muwaadiniinta kuleylka iyo qabowga jiilaalka ee nidaamka gaadiidka. [More ...]
Kanal Istanbul oo diley Marmara
Sharciga jilicsan ee Mashruuca Kanal Istanbul, oo lagu soo daro qorshaha waxqabadka maalinlaha ee AKP ee 100, waa mid dhameystiran. Xisbiyada mucaaradka waxay ka soo horjeedaan mashruuca sababtoo ah saameynta deegaanka iyo bulshada labadaba. Oggolaanshaha Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan [More ...]
Wadayaasha Imtixaanka ee Ankara Sivas YHT Line waxay ka bilaaban doontaa 2019
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Cahit Turhan, Khadadka Tareenka Xawaaraha Sare ee Ankara-Sivas (YHT), dhismaha baaritaannada. “ANKARA-SİVAS, WAA MUHIIMKA MUHIIMKA AH EE SILK ROAD ilk Xukunkii ugu horreeyay ee 100 maalinlaha ah ee Nidaamka Xukuumadda ee Madaxweynaha. [More ...]
RayHaber 06.08.2018 Warbixinta Shirka
Bixinta iyo Rakibaada Motors-yada loo yaqaan 'Scarsor Motors' oo lagu dhejin doono Shears Adana Transportation Master Plan Diyaarinta Adeegyada Wadahadalka
Dowlada Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay wadooyinka iyo howsha dayactirka ka waddaa magaalada oo dhan. Qeybta Gaadiidka ee Gölcük ee ka shaqeysa xagaaga iyo Degmadda Cusub, oo kutaala Magaalada Başören teacher Street. Wadada, wadada laamiga [More ...]
3. Madaarka Apron Migrated? Mise Metro Work ayaa la qabtaa?
3 wuxuu ku faafay warbaahinta bulshada. Intii lagu dul fadhiyay ajendaha godka weyn ee laga dhisay garoonka ayaa waxaa laga soo saaray hadalo is khilaafsan. shaqaale ka shaqeeya maddaarka oo la hadlay SoL ayaa sheegay in shirkadda masuulka ka ah ay isku dayeyso inay qarinto ilkaha. Warbaahinta bulshada [More ...]
Duqa Magaalada Bursa Alinur Aktaş, Isbitaalka Magaalada Bursaray ayaa ku dhawaaqay bartilmaameedka furitaanka khadka. Ku-xigeennada Xisbiga AK Party iyo Duqa magaalada Bursa Alinur Aktas, munaasabadda ayaa booqday warbaahinta shalay. [More ...]
Jihada Tareenka Dhameystiran ee Zonguldak "4 Train Set Tuulo Z
Tareennada rakaabka ee Zonguldak-Karabuk-Zonguldak iyo Zonguldak-Gökçebey-Zonguldak ayaa ka dhashay buuq ka dhashay cabashooyin ka soo yeedhay gudoomiyaha gobolka AK Party Zeki Tosun iyo xildhibaanka Polat Turkmen, Ahmet Colakoglu iyo Hamdi Ucar. [More ...]
Xayeysiinta YHT waxay kasbatay xiisa weyn: Marka laga yimaado koontada xawaaraha sare ee xawaaraha sare (YHT) ee TCDD, filim ganacsi oo qosol leh oo madadaalo ah oo ka careysiinaya caqliga xayeysiinta, qabow iyo caajisnimada ayaa la daabacay. Xayeysi gaaban [More ...]